Lavitry ny Maso, Lavitry Ny Saina ? Ireo Fihetsiketsehana Any Amin’ny Fihaonana An-Tampony Momba Ny Fiarovana Nokleary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Avrily 2014 23:39 GMT
Fotoana fohy mialohan'ny fahatongavan'ny Filoha Shinoa Xi Jinping teo amin'ny Royal Palace any Amsterdam tamin'ny 22 Martsa 2014, nanangana fefy ny mpiaro ny filoha mba tsy ho hitan'ireo mpanohitra ny Filoha. Sary avy amin'i Hans Knikman/Demotix.
Mpanao gazety 3.000 araka ny tatitra no tany amin'ny Fihaonana an-tampony momba ny Fiarovana Nokleary 2014 izay natao ny 22 ka hatramin'ny 25 Martsa any Pays-bas, ary nikaonan'ny mpitarika 58 maneran-tany loha mba hiady hevitra ny amin'ny fomba hanakanana ny fampihorohoroana nokleary maneran-tany. Araka ny efa nandrasana amin'ny fivoriana politika nankalazaina be tahaka izao, dia tonga tao ihany koa ireo mpanohitra avy aminà antokom-kevitra samy hafa sy ireo tia jerijery.
Hetsika roa samy hafa no nisy tao – ny fanoherana tarihan'ny mpikatroka ao amin'ny “Free Tibet” any Amsterdam ary ny tarihan'ny Iraniana mpomba ny Amerikana any La Haye.
Nangatahan'ireo mpanohitra avy ao amin'ny ‘ Free Tibet’ ny hihaonan'ny Filoha Shinoa Xi Jinping amin'ilay Mpitarika ara-panahy ny Bodista, ny Dalai Lama, any an-tsesitany ary atomboka amin'ny momba an'i Tibet ny resaka. Heverin'i Beijing fa ao anatin'i Shina i Tibet nefa ataon'ny tibetàna hoe fibodoana ny fisian'ny Shinoa any aminy ary ampangainy ho manitsakitsaka ny zon'olombelona i Beijing.
Vantany tonga tao amin'ilay fivoriana i Xi, dia gaga ireto mpanohitra rehefa nananganan'ny tompon'andraikitry ny fiarovana Shinoa fefy fotsy mba tsy hahafahan'ny lehiben'ny mpanohitra mahita ny fihetsiketsehana.
@Tibetans #Chinese President Visits Amsterdam. #FreeTibet #Protesters Were Willing To #Welcome. #ScreenedOff #Fail pic.twitter.com/dVQbr919Bw
@Tibetans Mitsidika an'i Amsterdam ny filoha #Shinoa. Vonona ny hiarahaba azy #Welcome. ny #FreeTibet #Protesters #ScreenedOff #Fail
Mametraka ireo fefy ny mpiaro ny Filoha Shinoa (ankavia) mba tsy ahitan'i Jinping ireo mpanohitra mpomba an'i Tibet (ankavanana) any Amsterdam.
Na dia i Eberhard van der Laan, Ben'ny tànanan'i Amsterdam, aza dia nilaza ho gaga ihany koa tamin'ilay hetsika.
Rehefa notantarain'ny gazety any Pays-bas ilay zava-nitranga, dia tsy nanao izany ho zava-dehibe ny haino aman-jery sosialy miteny Anglisy:
Chinese censorship (re Tibet & Human rights) spreads to Amsterdam as soon as President Xi comes to visit… http://t.co/M7Hf2ky3TJ
Ny sivana Shinoa (Tibet sy ny Zon'olombelona indray) tonga hatrany Amsterdam raha vao tonga ny Filoha Xi…
Ny ampitson'io, ireo mpikomy ireo ihany, fa tany La Haye indray, no niteny fa hampanao fanadihadiana ny amin'ilay zava-nitranga hahalalana raha nanampy ireo mpiaro ny Filoha ny mpitandro filaminana Holandey ary hahitana ihany koa raha toa ka handefa hafatra diplomatika ho any Shina i Pays Bas, amin'ny fahafantarana fa sokajiana ho efa lasa lavitra amin'ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety sy ny fahalalahan'ny fitenenana i Pays Bas .
Notantaraiko taminà mpanao gazety Shinoa miasa ao amin'ny masoivohom-baovao Shinoa momba ny vaovao iraisam-pirenena tao amin'ilay fihaonana an-tampony ilay tranga hahafantarana ny heviny. Tsy tamim-pisalasalana no nanekeny fa ” zavatra tsy maintsy natao ” ny fiketsiky ny mpiaro ny Filoha. Tsy dia ivalamparana be loatra ny fifanoheran'i Tibet sy Shina any amin'ny haino aman-jery fihainom-bahoaka any Shina, hoy izy.
Iraniana Mpikomy mpomba ny Amerikana ?
Iraniana Mpanao fihetsiketsehana eo akaikin'ny NSS 2014 any La Haye. Sary avy amin'i Chirag Sutar.
Nomena toerana tsara tao akaikin'ny toeram-pivoriana ireo vondronà Iraniana mpikomy monina any La Haye, mba hahafahan'ireo mpanao fihetsiketsehana miarahaba ny Filohan'i Etazonia Barack Obama amin'ny fandalovany. Fa nandritra izany fotoana izany dia noferana ho any Malieveld akaikin'ny fiantsonan'ny fiarandalamby any La Haye izay manalavitra ny toerana hanaovana ny Fikaonan-doha Maneran-tany momba ilay Fifampiraharahana ny ankamaroan'ny hetsika.
Fa ankoatra izay, fihetsehana iray notarihan'ny Stop de NSS no tsy nomen'ny mpitandro filaminana alàlana handeha lavitra kokoa miala ny Den Haag Central, fiantsonan'ny fiarandalamby, tamin'ny nanaovan'ny polisy sakan-dàlana tamin'ny alàlan'ny bisikiletany.
Tsy afaka manohy ny dianay ho any amin'ny lapan'ny tanàna izahay
Nangataka hetsika avy amin'i Etazonia ireo iraniana mpikomy mba hametra ny fanamboarana fitaovam-piadiana nokleary any Iran ary niantso azy ihany koa mba tsy hifampiraharaha amin'ny mollah. Tsy voalaza tao amin'ny gazety holandey io ry zareo akaiky be io, tsy olana teo amin'ny haino aman-jery sosialy izany. Fa nahoana io vondrona io no mahazo manao hetsika eo akaikin'ny toerana hivoriana, fa ny hafa kosa nosamborina ? Moa va natao mba hisintonan ny fijerin'ny olona mba hitongilana any amin'ny hetsika ataon'i Etazonia hamelezana an'i Iran ?